सूर्य छुन पहिलोपटक अन्तरिक्षयान उड्दै, फिजिक्सका बारे उठेका प्रश्नको जवाफ अब पाइने – Medianp
सूर्य छुन पहिलोपटक अन्तरिक्षयान उड्दै, फिजिक्सका बारे उठेका प्रश्नको जवाफ अब पाइने
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २६, २०७५१३:१५0
एजेन्सी,२६ साउन । अन्तरिक्षयान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाले नासाको केनेडी स्पेस सेन्टर फ्लोरिडाले शनिबार बिहान ३ :३३ बजे सूर्यलार्इ छुने गरी पहिलो अन्तरिक्षयान पठाएको छ ।
८ वर्ष देखि अध्यायन गर्नेशिलशिलामा रहेका कयौ इन्जिनियर र वैज्ञानिकहरुको निरन्तर संघर्षको कारण आज बिहान अन्तरिक्षयान उडाउन सफ भएका छन् । विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक भएको छ । उडामका अनुसार सूर्यको तापबाट पार्करलार्इ जोगाउन बाहिरी पत्रमा ११.४३ सेन्टीमिटरको बाक्लो अति शक्तशाली तापको लेप लगाइएको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् ।
मानव निर्मित कार आकारको अन्तरिक्षयान सुर्यको सतह भन्दा ४० किलोमिटरको दूरिसम्म जाने बताइएको छ । अन्तरिक्षयानले सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुगेर राम्ररी अध्यायन गर्ने भएको छ । सौर्य हावाहरुको बारेमा अनुमान गर्ने युगिन पार्करको नाममा यो मिसिन चलाइएको हो ।
सूर्यबाट करिब १४९.६ मिलियन किलोमिटर टाढा पृथ्वी रहेको छ । पार्कर सोेलर प्रोबले बाहिरी वातावरण र ताराहरुको फिजिक्सका बारेमा उठेका प्रश्नको बारेमा जवाफ खोज्न सूर्य छुन पहिलो पटक अन्तरिक्षयान उडान गरिएको हो ।
धनका लागि सौता लागेका बलिउड सुन्दरीहरु !
२ वर्षको बालक २५० फिट गहिरो खाल्डोमा खसेपछि, बचाउनलाई देशभरका मानिसहरुले गर्दैछन् यस्तो काम
कङ्गोको राष्ट्रपतिमा शिसेकेडी विजयी भएको अदालतको घोषणा !
बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको योजना संसदद्वारा अस्वीकृत, सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता